Sunday July 01, 2018 - 22:14:17 in Wararka by Super Admin
Qeybtii 1aad: Hordhac Shirkadda Shiinaha ee Poly-GCL ayaa maanta billaabaysay soosaarka gaaska ceelasha Elelle (Hilala). In kasta uu koobnaan doono, maadaama lagu dhaaminayo booyado ama haamaha gaaska si shirkadaha shamiintada iyo goobaha tamarta b
Qeybtii 1aad: Hordhac Shirkadda Shiinaha ee Poly-GCL ayaa maanta billaabaysay soosaarka gaaska ceelasha Elelle (Hilala). In kasta uu koobnaan doono, maadaama lagu dhaaminayo booyado ama haamaha gaaska si shirkadaha shamiintada iyo goobaha tamarta badan ku baxdo, haddana waa tallaabo naxdin weyn ku noqatay qof walba oo Soomaali ah oo damiir iyo dareen waddani ah leh. Dad yar oo waxgarad ah baa fahansan barnaamijka ra'iisul wasaaraha (RW) cusub ee Itoobiya loo soo xambaariyay. Faahfaahin intaa dheer sii geli meyno hadda wakhtigan xaadirka ah, laakiin waa in aynu niyadda ku heynaa qorshaha siyaasadeed ee socda uu yahay xeelad ka mid ah xeeladaha dagaal ee ka socdo Geeska Afrika. Qoraalkan 1aad ee ugu horeeya waxaan ugu talagaley in Soomaalida sawir muuqaal ah aan ka siiyo xaaladda taagan, si dareenkooda aragtida u helo xaqaa'iiq ay ka tusaala qaataan. Waxay rajadeydu tahay in arrintani Soomaalida ku abuurto lexjeclo, dabadeedna u midoobaan difaaca kheyraadkooda iyo ilaalinta mustaqbalka ummaddooda.
Itoobiyaanka marka ugu horreysa dadka ayay barakiciyaan; dil, xiritaan, dhac, kufsi, iwm. Marmarka qaarkood, tuulooyin dhan baa lagubaa, sida hay’adda xuquuqul insaanka HRW raboort kusoo saareen sanadkii 2008(Muuqaal.12)